Kaddib markii Messi xalay garoonka laga saaray, waa kuwee LIXDA ciyaaryahan ee aan kaarka cas loo taagin xirfaddooda ciyaareed? – Gool FM
(Brazil) 07 Luulyo 2019. Kabtanka xulka qaranka Argantina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa lagu qasbay inuu qaato kaarka cas markii ugu horeysay kulan rasmi ah, inta lagu gudi jiray ciyaartii xalay Chile ee tartanka Copa America 2019 ee dalka Brazil.
Lionel Messi ayaa murun xoogan uu dhex maray xiddiga xulka qaranka Chile ee Gary Medel daqiiqadii 37-aad, garsooraha ayaana go’aansaday inuu si toos ah ciyaarta kaga saaro.
Sidaas darteed Lionel Messi ayaa ka dhigan inuu qaatay kaarkiisii ugu horeeyay ee casaan ah kulan rasmi ah xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in Messi uu hado kahor qaatay kaarka roosaha, kulan saaxiibtinimo ay la ciyaareen Hungary sanadkii 2005, isagoo aan wali wax kaar cas ah ku qaadanin kooxdiisa Barcelona.
Hadaba kaddib kaarka cas uu qaatay Lionel Messi, halkan hoose ka eeg xiddigaha aan waligood qaadanin kaarka Roosaha xirfadooda ciyaareed kubadda cagta:
1- Andrés Iniesta:
Andrés Iniesta waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ciyaartoydii ugu fiicnayd 20-kii sanno ee ugu danbeysay, wuxuu xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta qaatay 65 jaale, mana uusan qaadanin wax kaarka casaanka ah.
2- Raúl González:
Intii uu kubada cagta ciyaarayay, Raúl González ma uusan qaadanin kaarka casaanka ah, inkastoo uu kulamo badan ku ciyaaray garoomo kala duwan iyo horyaalo kala duwan, waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xiddigaha ugu dabeecada wanaagsan kubadda cagta.
3- Gary Lineker:
Xiddigan reer England wuxuu tusaale u yahay qof walba, waligiis ma uusan qaadanin kaarka roosaha, sidoo kale ma uusan kala kulmin garsoore kaarka digniinta ama jaalaha, wuxuuna u soo ciyaaray kooxaha Leicester City, Everton, Barcelona, ​​Tottenham Hotspur, Nagoya Grampus ee dalka Japan, Linker wuxuu ciyaaray in ka badan 565 kulan, isagoo dhaliyey 281 gool.
4- Michel Platini:
Waa mid ka mid ah halyeeyada kubada cagta ee dalka Faransiiska, waligiis ma uusan gudoomin kaarka cas 660 kulan uu ciyaaray xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, laacibkii hore kooxda Juventus ayaa wuxuu sidoo kale ku guuleystay abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or tiro 3 jeer ah.
5- Philipp Lahm:
Daafaca reer Germany ayaa ciyaaray ku dhawaad 700 kulan, waana ciyaar yahan kale ee aan xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta qaadanin kaarka roosaha, wuxuuna ku caan baxay inuu ciyaaro kubadda cagta ee nadiif ah, taasoo ka dhigtay inuu ka mid noqdo ciyaartoydii ugu muhiimsaneyd kooxda Bayern Munich.
Xiddigan reer France ayaa ka mid ah ciyaartoyda inta ay ku gudi jiraan garoonka ciyaara kubadda cagta ee nadiif ah, weeraryahanka kooxda Real Madrid ayaana waligiis gudoomin kaarka roosaha xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta.